महिला र महिला दिवस
अन्तर्र्रािष्ट्रय नारी दिवस मनाउन थालेको ११० बर्षभएछ । नारी माथि गरिने बिभिन्न खाले शोषणको अन्त्यका लागि आवाज उठेको यति धेरै बर्ष हुँदा पनि नारी माथिको कुदृष्टि अझै कायमै छ । लैंगिक विभेद देखि लिएर श्रममा समानता छैन । समाजमा नारी दोस्रो दर्जामा छिन् । बाउको सम्पतिमा अनेक सम्झौता गर्दा पनि अधिकार छैन । अझै पनि अर्काको घर जाने जात भएकोले जिम्मेवारी दिइन्न । न खुलेर बोल्न पाउँछे न त हाँस्न नै । एक्लै हिड्ने अनुमति छैन । साथीँंग हिंडे बात लाग्छ । परपुरुषसँग बोले बाउको, दाजुभाईको, लोग्नेको अनि छोराको इज्जत जान्छ ।
गर्र्भै देखि सबैको ईज्जतको ठेकेदार बनेकी नारी सके जन्मनै पाउदिन, जन्मि हाली भने तोते बोली देखि नै उसको शरीर र दुई खुट्टाको कापको भोको यौनप्यासी दुष्ट मानवको गिद्धे नजरबाट बाँच्न मुस्किल हुन्छ । ठुली भए पछि जिम्मेवारी सम्हाल्दा सम्हाल्दै कुरुप बन्छे अनि बोक्सी कहलिन्छे । परिवारको स्याहार र सेवामा समर्पित हुदाहुदै आफ्नो स्याहार कैले गरोस् ?
त्यहि नारी बुढी हुन्छे अनि आफ्नै सन्तानबाट गलहत्याईन्छे र मन्दिर, आश्रमको पाहुना बन्छे । अन्त्यमा पराई काँधमा चढेर चितामा पुग्छे । यहि हो हाम्रो समाजको वास्तविकता ।
एउटी महिला राष्ट्रपति हुँदैमा सम्पूर्ण नारी स्वतन्त्र छन् भनेर गलत ब्याख्या नगरियोस् । खोक्रा भाषण हैन चेतना फैलाउँ, सोच बदलौ । जबसम्म महिलामाथि हेर्ने सोच, दृष्टि बदलिदैन, तवसम्म नारी दिवसको अर्थ रहदैन । नारी कसरी खुशी हुन्छे, नारीलाई के के अधिकार दिनुपर्छ, नारीले के के अधिकार माँग्नुपर्छ, त्यो राज्यले, नारीले र पुरुषले बहस गर्नुपर्छ । कति नारी छन् नीतिनिर्माता ? किन नारीलाई घरदेखि राज्यसञ्जालमा विभेद गरिन्छ । यत्ति कुरामा पनि ध्यान नदिनेले कर्मकाण्डी नारी दिवस मनाएर के अर्थ रहन्छ र ?
आवाज चर्को नगरी बोल गाउँलेले सुन्छन्
नुहेर बिस्तारै हिंड पाहुनाले उरन्ठेउली भन्छन्
मुख बन्द गरेर खाना चपाऊ नत्र कुकूर्नी भन्छन्
बिरोधका औंला नउठाऊ तिमी छोरी हौ ।
यौवनावस्थाकी तिमी पुरुषको दृष्टिमा निहुरनु
कुर्कुच्चा ढाकियोस् कम्मरसम्म वस्त्र पहिरनु
कसैले तिम्रो नितम्ब चिमोटे पनि चुपचाप सहिरहनु
बिरोध तिमिले गर्ने होइन तिमी त युवती हौ ।
बुहारी बनेर ससुरा जेठाजुको मानसम्मान गर्नु
घरको बंश धान्न पुत्र प्राप्तिका लागि पति शरणमा जानु
पाउको जल खानु सासुको गोडा माड्नु पेटीकोट धुनु
नाई नभन्नु बिद्रोह नगर्नु आखिर तिमी बुहारी हौ ।
परपुरुषसंग नबोल्नु उनको मुखैमा नहेर्नु
पुरुषसँग बोल्न बर्जित छ मुख ढाकेरै हिड्नु
घरमा सबैको सेवा गर्नु आमा बन्नु, बुहारी बन्नु
पत्नी बन्नु,भान्से बन्नु,कुचीकार बन्नु तिमी त नारी हौ।
बालकमा केटा साथी हुँदा बाको इज्जत जान्थ्यो
जवानीमा केटासँग बोल्दा ईज्जत दाजुभाईको जान्थ्यो
बुहारी हुँदा पुरुषसँग बोल्दा पति र घरको इज्जत जान्छ
बुढेसकालमा पुरुषसँग बोल्दा छोराको इज्जत जान्छ ।
आहा हामी नारी साँच्चै कति महान् ठेकेदार
परपुरुषसँग बोल्यो कि पप्पुले बनाएको पुल
जस्तै पारिवारिक सम्बन्ध भाँचिन्छ ।
त्यसैले पनि नबोल तिमी आईमाइ हौ ।